Archives des Vavaka | Page 3 sur 14 | Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Catégorie : Vavaka
Ry Maria ô, Ianao izay mamirapirapitra mandrakariva eo amin’ny làlanay, toy ny famantarana ny famonjena sy ny fanantenana. Mitoky aminao, Fahasitranan’ny marary izahay, Ianao ilay niombona tamin’ny fijalian-janakao teo am-pototry ny hazofijaliana, nefa nijoro...
Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – mey 2020
« Mba ho famantarana ny maha mpanompo ny Eglizy anie ny fijoroan’ny Diakra amin’ny fanomezam-pahasoavana hitory ny Tenin’Andriamanitra sy hanompo ny mahantra ». Ho an’ireo Diakra indray no iompanan’ny fangatahana anentanan’ny Papa Ray Masina ny...
Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – aprily 2020
Mba hahazo fanampiana sy fanohanana amin’ny ezaka ataony anie ireo te hiala amin’ny filàna mangeja isan-karazany. Anisan’ny loza lehibe mandrava sy manapotika ny fiainan’ny olombelona ny fahazaran-dratsy izay miteraka filàna mangeja, mitondra mankany amin’ny...
Papa Fransoa : vavaka manokana noho ny Covid-19
Fangatahana ampanaovin’ny Papa mandritra ny volana Marsa 2020
« Mba haharitra amin’ny fiainana ny Evanjely sy hihamatotra anie ny fiombonan’ny Eglizy any Chine ». Mitodika manokana amin’ny Eglizy any Chine ny fangatahana ampanaovin’ny Papa antsika kristianina mandritra ity volana Marsa ity. Ny Eglizy any...
Kongresy eokaristika 2020 : vavaka hasiviam-bolana, febroary sy marsa
Toy izao indray àry ny Taridalana ho an’ny Vavaka hasiviam-bolana mandritra ny volana Febroary sy Marsa 2020 izao. Ny Dingana fahatelo sy fahefatra ao amin’ny « Lalan’ny Fo » no hodinihina sy hiainana ary hifampizarana. Ny...
Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – febroary 2020
Mba hohenoina sy hoheverina anie ny tarainan’ireo mpifindra monina vokatry ny fanondranan’olona mamoafady satria mbola mpiray tampo amintsika izy ireo. Anisan’ny mampiavaka ny Papa François amin’izao fitondrany sy fiahiany am-panahy ny Eglizy izao,...
Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – janoary 2020
Mba samy hampanjaka ny fiadanana sy ny fahamarinana eto amin’izao tontolo izao anie ny mpianatr’i Jesoa, ny mpino ary ny olona tsara sitrapo.
Kongresy Eokaristika 2020 : vavaka hasiviam-bolana ho fiomanana
Arahabaina isika nankalaza tao anatin’ny hafaliana sy fanantenana ny ivon’ny Taon-jobily faha 100 taona iny. Mitohy hatrany ny fiainantsika ny Taon-jobily. « Mirosoa amin’ny lalina kokoa hatrany ». Hamafiso amin’ny fiainam-bavaka sy ny fiainam-panahy ireo fiomanana...
Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – desambra 2019
Mba hataon’ny firenena tsirairay ho laharam-pahamehana anie ny hoavin’ny ankizy, indrindra ireo mijaly Mifototra indrindra amin’ny hoavin’ny ankizy ny fangatahana ampanaovin’ny Papa mandritra ity volana ity. Manentana ny vita Batemy rehetra tsy ankanavaka izy...
Vavaka ho an’ny raibe, ny renibe ary ny zokiolona
Faritra zezoita an’i Madagasikara : jôbily telo sosona !
Hafatry ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara – Mey 2021
Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA © 2021. Tous droits réservés.